DAAWO MUUQAAL:Wasiir Beyle oo Kuu Iftiminaya Wada Cagaran ee Mustaqbalka Soomaliya HAMIGISA. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO MUUQAAL:Wasiir Beyle oo Kuu Iftiminaya Wada Cagaran ee Mustaqbalka Soomaliya HAMIGISA.
Soomaaliya ayaa horay usii wadi doonta dadaalada yareynta saboolnimada iyo dekedaha gobolka iyo wadooyinka waa weyn hadii daymaha caalamiga ah uu cafiyo deynta ah $ 5 billion ee bishaan Febraayo, sida la filayo, wasiirka maaliyada ee dalka oo sheegay maanta.
Wasiirka Maaliyadda C / raxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay horumarka la sameeyay intii lagu guda jiray wada hadaladii uu la lahaa saraakiisha Mareykanka, deynta ugu weyn ee Soomaaliya, Ingiriiska, iyo kuwa kale intii lagu jiray kulamada sanadlaha ah ee IMF Iyo World Bank todobaadkan.
Beyle wuxuu wareysi Siiyey wakaalada wararka ee Reuters Waxaana uu Intaasi Ku Daray wax walba waa ay socdaan. Wuxuu sheegay in Mareykanka iyo mas’uuliyiinta kaleba ay ku faraxsan yihiin waxqabadka wanaagsan ee Soomaaliya ay ka Gaadhey bartilmaameedyada muhiimka ah ee barnaamijka si looga shaqeeyo cafinta deynta.
Maareeyaha Hay’adda Lacagta Adduunka, Kristalina Georgieva ayaa Sabtidii ballanqaaday IMF inay si buuxda u taageereyso dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto sidii loo dhiiri gelin lahaa deynta Cafinta “mustaqbalka dhow.”
Soomaaliya Waxaa Lagu Leeyahay Qiyaasti $ 4.7 bilyan deyn dibadeed, taasoo IMF ay ku dhawaaqday inay tahay mid aan la isticmaali karin. Sanduuqa wuxuu falanqeynayaa deeqaha saxda ah ee xubnaha looga baahan yahay si wax looga qabto deynta lagu leeyahay Soomaaliya ka hor kulanka guddiga bartamaha bisha Noofembar, Beyle ayaa sidaas yidhi.
Ingiriiska, Midowga Yurub iyo Qatar waxay soo bandhigeen inay soo bandhigaan $ 150 milyan oo qiyaastii $ 330 milyan ah oo ay Soomaaliya ku leedahay IMF, ayuu yidhi.
Maaliyadda Mareykanka, oo ay Soomaaliya ku leedahay hal bilyan oo doolar, ayaa door ka cayaartay dhiirrigelinta taageerada xubnaha kale ee IMF, waxayna wadahadalo kula jirtay Koongareeska oo ku saabsan talaabooyinka loo baahan yahay in lagu tirtiro deynta weyn ee labada dhinac.
“Waxay ahaayeen dad aad uga shakisan markii ay dowladdeenu billowday, laakiin hadda waxay leeyihiin Soomaaliya waay Isku Filnaan Kartaa,” ayuu yidhi.
Mar haddii ay hesho deynta Cafinta, Soomaaliya waxay wadahadal la galaysaa sidii ay u heli lahayd deeqo qiimihiisu qiyaastii yahay $ 300 milyan sanadkiiba saddexda sano ee soo socota, ayuu yiri Beyle.
Taasi waxay u saamaxaysaa in ay biloowdo kharashaadka ku baxa mashaariicda lagu yareynayo saboolnimada iyada oo la wanaajinayo waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka, kor loo qaadayo biyaha iyo korontada iyo in la maal-galiyo mashaariicda kale ee muhiimka ah ee kaabayaasha dhaqaalaha, ayuu yidhi.Wasiirku.
Wasiirka Maaliyada Soomaliya Cabdiraxman Beyle wuxuu sheegay in Soomaaliya ay sidoo kale la shaqeyneysay deris ka Kenya, Ereteriya, Itoobiya iyo Jabuuti shan sano oo dhan, $ 15 bilyan oo doolar oo lagu dhisayo dekedaha iyo marinnada gaadiidka.
Iyada oo ay taageerayaan Midowga Yurub, Bangiga Horumarinta Afrika iyo Bangiga Adduunka, mashruucu wuxuu gacan ka geysan doonaa sare u qaadista ganacsiga gobolka, ayuu yidhi.
“Soomaaliya waxaa ka go’an inay kaalinteeda ka qaadato. Waxaan u maleynayaa inaan si dhab ah u leexanay geeska. Markay dadku go’aansadaan, waxay samayn doonaan mucjisooyin, ”ayuu yidhi.
Previous articleDAAWO:- Maxaa kajira in la badalay gabadhiiku caanbaxday difaacidda Badda ee Kiiska Kenya? “Xog Cusub”.
Next articleDAAWO VIDEO:Isbadaladi Dowlada Kacaanka Samaysay lakiin Indhaha Laga Qariyey..
Qoor-qoor” 4-sano kasta dalka waa in doorasho ka dhacdo si loo...
Madaxweyne Laftagareen”“Waxaan ka tashaneynaa Doorasho sidii loo wadaagi lahaa”
Waxka ogoow: Nuxurka Khudbadii uu jeediyay Madaxweynaha Jubbaland